मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको ७ वर्षे अवधिको‘८.७५ % ऋणपत्र विक्री खुला - Digital Khabar
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको ७ वर्षे अवधिको‘८.७५ % ऋणपत्र विक्री खुला
०७ साउन, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको आजदेखि रू. १ अर्ब २५ करोड बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र विक्री खुला भएको छ । बैंकले ७ वर्षे अवधिको ‘८.७५ % मुक्तिनाथ डिबेञ्चर २०८४÷८५’ नामको ऋणपत्र कार्यालय अवधिपश्चात बिक्री खुला गर्न प्रतिकित्ता रू. १ हजार अंकित दरको कुल कित्ताऋणपत्रमध्य रू. ५० करोड बराबरको ५ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ भने बाँकी रू. ७५ करोड बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले ऋणपत्र लागि बोर्डमा दियो निवेदन